Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment 'मैले दिएको आयुर्वेदिक औषधिले ठिक नहुने कोहि छैन, असर नगरे पैसा फिर्ता लानुस भन्ने गर्छु' - Pnpkhabar.com
‘मैले दिएको आयुर्वेदिक औषधिले ठिक नहुने कोहि छैन, असर नगरे पैसा फिर्ता लानुस भन्ने गर्छु’
पिएनपिखबर : विगत १७ वर्ष देखि ‘जुस पसल’ खोलेर बसेका छन् काभ्रेका बासुदेव ढकाल। विगतमा धेरै संघर्ष गरेका उनी जुस व्यापार मात्र नभई आज धेरैका लागि डाक्टर बनेका छन्। जुस पसलको साथ-साथै उनले आयुर्वेदिक उपचार पनि गर्ने गर्छन। स्त्री रोग, ग्यास्ट्रिक, पाइल्स, दम, युरिक एसिड, बांजोपन इत्यादिको औषधि उनी बच्ने गर्छन।
आफै तयार पारेको औषधिले कयौ विरामी निको भएको उनको दावी छ। उनी भन्छन्, ‘मैले दिएको औषधिले ठिक नहुने कोहि छैन, असर नगरे पैसा फिर्ता लानुस भन्ने गर्छु।’
घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारण उनले १ कक्षा पनि पढ्न पाएनन्। ६ वर्षको कलिलो उमेरमा बुबा गुमाएका उनले जीवनमा निकै संघर्ष गरे। काभ्रेमा जन्मिएको उनी १ मानो चामल र ३० रुपैयाँ बोकेर श्रीमतीको साथमा केहि गर्छु भन्ने सोचले राजधानी प्रवेश गरे । शुरुवातमा उनले डेरी देखि विभिन्न ठाउँमा काम गरे। जब उनले जुस तथा आयुर्वेदिक औषधिको ब्यापार गर्न थाले त्यसपछि उनको दैनिकी सहज हुँदै गयो।
उनले आफ्नो सन्तानलाई यही पसलको आम्दानीले हुर्काए। अहिले उनको छोरा बैकमा कार्यरत छन् भने छोरीको आफ्नै पसल छ। उनले काठमाडौँमै घरजग्गा पनि जोड्न सफल भए। अहिले महिना कै २०, ३० हजार कमाउने उनी बताउछन। विगतमा धेरै दुख झेलेका उनले कहिले हार मानेनन्। निरन्तर प्रयासले आज उनी सफल र खुशी छन्।
आउनुहोस् हेरौ भिडियोमा ढकालले पिएनपिखबरसँग गरेको प्रेरणादायी कुराकानी :
सरकारी मोटरसाइकल चड्ने भाइरल युवायुवती मिडियामा, सनसनीपूर्ण खुलासा (भिडियो)
मेमोरी किङ शाहीले पुण्य गौतम दिएको किताब पढ्न सकेनन (भिडियो सहित )
प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा प्रदर्शन, नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई हम्य हम्य (भिडियोसहित)
पार्टी फुटे कस्तो हालत हुन्छ भन्ने हेर्न, बाबुराम भट्टराई हेरे मात्रै पुग्छ : नेता रायमाझी
साउन २५ गतेदेखि काठमाडौंमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द
कोरोनाको केन्द्र बन्यो काठमाडौं उपत्यका
तत्काल कक्षा ११ को परीक्षा नलिन सरकारद्वारा निर्देशन
अंहकारी प्रधानमन्त्री ओलीको दुर्योधनको झैं सर्वनाश हुन्छ : नेता रिजाल
कोरोना कहर : कतै निषेधाज्ञा, कतै सिल, कुन-कुन जिल्लाले गरे निर्णय ?
सुनचाँदीको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, आज कारोबार कतिमा हुँदैछ ?
सञ्चालनमा नआउँदै त्रुटि, नेपालकै लामो झोलुङ्गे पुलमा
वडाध्यक्षकै मिलेमतोमा नक्कली बिहे दर्ता !
काभ्रेमा युवतीले गरिन् क्वारेन्टाइनमै आ’त्मह’त्या
थप ४६४ जनामा संक्रमण पुष्टि, कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ७० पुग्यो
वीर अस्पतालमा कार्यरत थप १ चिकित्सकमा कोरोना पुष्टि
प्रवक्ता श्रेष्ठलाई लक्षित गर्दै ओलीका सल्लाहकारको ट्वीट : पदको लाज त जोगाउनुहोस्